Mpanamboatra hafa | Sina Hafa Factory & Mpamatsy
Basy bump Lock Lock
Dimple Lock Bump Gun (aka. Dimple Pin Bump Key Gun Set) dia misy lelany 10 manerantany ho an'ny fandrefesana ireo varingarin'ny pin dimple fototra miaraka amina tsipika pin eo ankavanana na amin'ny ankavia. Ny hery tsara indrindra amin'ny bontsibontsina sy ny halaviran'ny elanelan'ny elatra dia azo ahitsy. Ny teknika fanalahidy mahomby dia miankina amin'ny lafin-javatra maro. Noho izany dia ilaina ny manatanteraka ny karazana dondona refesina tsara sy avahana. Ilay antsoina hoe Bump Key Technology dia ahafahan'ny tsirairay manokatra ...
Ny H&H 10 Dimple Lock Pick Set dia misy fomba fisafidianana 10 samy hafa ny hateviny 2, ary tafiditra ao koa ny fitaovana fihenjanana roa. Ny paosin-doko dia vita amin'ny plastika maitso, marevaka ary mafy, ary isaky ny tahony fakany isa 1-10 mba hahafantarana azy mora foana. Inona no tafiditra ao: 10 isan-karazany mifantina karazana dimple amin'ny hatevin'ny 2 samy hafa. Fitaovana fihenjanana 2 Tonga atolotra ao anaty boaty zipper malefaka tsara H&H, marika avo lenta! Fandaharana momba ny kaomandy Raiso ny kaonty amin'ny alàlan'ny mailakao - Log i ...
HUK Lock Tiger Mena
Ny HUK Red Tiger Lock Picks dia napetraka tsara ho an'ny fikandrana hidin-trano amin'ny ankapobeny, ny fonosana hidin-trano tsirairay dia manana fonon-tànana mavesatra ho an'ny fampiharana marobe. Ity karazana fikajiana ity dia misy fisafidianana hook, pickp dimple, rake picks, mpanala fanalahidy tapaka ary wrenches misy fihenjanana. HUK Red Tiger dia manolotra safidy voafantina voafantina vita tsara sy natao ho an'ny ambaratonga rehetra amin'ny fahaizanao mifantina hidy. Ny fananana karazana toy izany amin'ny andiany iray dia mahatonga izany ho tanjona kendrena ankapobeny. Fandaharam-bola mba hisorohana ny kaonty amin'ny alàlan'ny mailakao ...
Ny GOSO 7 Pin Tubular Lock Pick dia misy sombiny 3 izay manahaka ireo habe telo mahazatra hitanao any an'ala. Ny fikajiana tsirairay dia azo ovaina tanteraka mba hahafahanao manao izay lalina ilainao. Zava-dehibe indrindra izany satria matetika ny mpanamboatra isan-karazany dia mampiasa hidin-trano izay lalina kokoa na marivo kokoa miankina amin'ny masinina. Ny habe telo naterak'ity set ity dia 7mm, 7.5mm ary 7.8mm. Afaka misafidy hidin-drano be indrindra ao anatin'ny 30 segondra izahay. Mba hametrahana ity tubul ...